Arzantina takiana mba hametraka 4,000 TO 5,000 CRYPTO ATM ny firenena - Blockchain News
Arzantina takiana mba hametraka 4,000 TO 5,000 CRYPTO ATM ny firenena
Arzantina dia mety ela dia ho mpitarika ao amin'ny crypto ATM tsena. Araka ny haino aman-jery ao an-toerana, ny firenena dia mety ho vonona ny handray eo 4,000 ary 5,000 ATM izay manohana virtoaly vola.
Araka ny Tale Jeneralin'ny sy ny mpanorina ny Odyssey Group, Sebastian Ponceliz, ny ATM dia tsy azo ampiasaina ho an'ny olona mba hanesorana vola, fa koa noho ny fitantanana virtoaly vola, ny alalan 'ny fampiasana ny bi-directional Bitcoin ATM.
"Tsy misy izay hoe vola convergence izay mahatonga antsika hampiasa ny fitaovana isan-karazany ny vola sy ny fifanakalozana (vola, crypto, e-mpanjifany, tsy mivadika hevitra, etc.) ary ny olombelona ho teboka fifandraisana izany dia ATM izay afaka transact vola maro, mamadika nomerika vola ho ara-batana sy ny mifamadika amin'izany,"Hoy i Ponceliz.
Odyssey Group dia iray amin'ireo mpamatsy ATM lehibe indrindra ao amin'ny United States, Meksika, Kolombia sy Espaina.
Ny fanapahan-kevitra efa noraisin'ny ny orinasa taoriana kelin'ny ny governemanta Arzantina nanapa-kevitra ny hanova ny fitsipika sy hamela ny orinasa tsy miankina mba manana ATM ao amin'ny magazay sy toeram-pivarotana.
Araka ny Coin ATM Radar, amin'izao fotoana izao tsy misy Bitcoin ATM misy amin'ny Buenos Aires.
Previous Post:Scientist.com nandefa antontan-kevitra ara-blockchain fanamarinana sehatra
Next Post:US mpanao lalàna mba hihaino raharaha ny famatsian blockchain rojo
Mey 8, 2018 amin'ny 12:31 AM
Mey 9, 2018 amin'ny 12:57 AM
Mey 20, 2018 amin'ny 12:27 AM
Mey 29, 2018 amin'ny 3:31 AM